Ukuzindla: isihe sihamba ngazo zombili izindlela | Ngiyamthanda uJesu
Ukuzindla: Isihe sihamba ngazo zombili izindlela
di UPaolo Tescione - Mashi 1, 2021
ukuzindla kwansuku zonke
Ukuzindla, isihe sihamba ngazo zombili izindlela: UJesu watshela abafundi bakhe: “Yibani nesihe, njengoba noYihlo enesihe. Yeka ukwahlulela futhi ngeke wahlulelwe. Yeka ukulahla futhi ngeke ulahlwe. Thethelela uzothethelelwa. ”ULuka 6: 36-37
USanta Ignatius weLoyola, kumhlahlandlela wakhe wokubuyela emuva ezinsukwini ezingamashumi amathathu, usebenzisa isonto lokuqala lokuhlehla egxile esonweni, ekwahlulelweni, ekufeni nasesihogweni. Ekuqaleni, lokhu kungabonakala kungathandeki kakhulu. Kepha ukuhlakanipha kwale ndlela ukuthi ngemuva kwesonto lalezizindlo, abahlanganyeli abahlehlayo bafinyelela ekuqondeni okujulile kokuthi badinga kangakanani umusa nentethelelo kaNkulunkulu.Babona isidingo sabo ngokusobala futhi ukuthobeka okujulile kuyakhuthazeka emphefumulweni wabo njengoba bebona icala labo bese bephendukela kuNkulunkulu ukuthola umusa waKhe.
Ma umusa uhamba ngazo zombili izindlela. Kuyingxenye yesimo somusa esingatholwa kuphela uma sinikezwa. Evesini leVangeli elingenhla, uJesu usinika umyalo ocacile ngokwahlulelwa, ukulahlwa, umusa nokuthethelelwa. Ngokuyinhloko, uma sifuna umusa nentethelelo, kufanele sinikele ngesihe kanye nentethelelo. Uma sahlulela futhi silahla, nathi siyokwahlulelwa futhi silahlwe. Lamagama acace bha.
Ukuzindla, isihe sihamba ngazo zombili izindlela: Umkhuleko eNkosini
Mhlawumbe esinye sezizathu esenza abantu abaningi balwe ukwahlulela nokulahla abanye kungenxa yokuthi abanakho ukuqonda kwangempela ngesono sabo kanye nesidingo sokuxolelwa. Siphila emhlabeni ovame ukubeka izaba ngezono futhi unciphise amandla aso. Lapha ngoba ukufundisa waseSt. Ignatius ubaluleke kakhulu kithina namuhla. Sidinga ukuvuselela umqondo wobukhulu besono sethu. Lokhu akwenziwa nje ukudala icala nehlazo. Kwenziwa ukukhuthaza isifiso sesihe nokuthethelelwa.
Uma ungakhula ube nokwazi ngokujulile ngesono sakho phambi kukaNkulunkulu, omunye wemiphumela uzoba ukuthi kuzoba lula ukwahlulela nokulahla abanye kancane. Umuntu obona isono sakhe maningi amathuba okuthi abekhona unesihe nezinye izoni. Kepha umuntu olwa nobuzenzisi nakanjani uzabalwela ukwahlulela futhi alahle.
Cabanga ngesono sakho namuhla. Chitha isikhathi uzama ukuqonda ukuthi isono sibi kangakanani bese uzama ukukhula ube ukwedelela okunempilo ngaso. Ngenkathi wenza njalo, futhi njengoba unxusa eNkosini yethu ngomusa wayo, thandazela ukuthi nawe unganikela ngesihawu esifanayo osithola kuNkulunkulu kwabanye. Njengoba umusa ugeleza usuka eZulwini uye emphefumulweni wakho, nalokhu kumele kwabelwane ngakho. Yabelana ngesihe sikaNkulunkulu nalabo abakuzungezile futhi uzothola inani langempela namandla ale mfundiso yevangeli yeNkosi yethu.
Jesu wami onesihawu esikhulu, ngiyabonga ngesihawu sakho esingapheliyo. Ngisize ngibone isono sami ngokucacile ukuze nami, ngikwazi ukubona isidingo sami somusa Wakho. Ngenkathi ngenza lokhu, Nkosi ethandekayo, ngithandazela ukuthi inhliziyo yami ivulekele lowo musa ukuze ngikwazi ukuwamukela futhi ngihlanganyele nabanye. Ngenzele ithuluzi langempela lomusa wakho waphezulu. Jesu ngiyakholelwa kuwe.
Umuzwa wecala: uyini nokuthi ungawususa kanjani?
Ukuzindla namuhla: ukuhlaselwa komubi
Ukuzindla namuhla: ubukhulu bukaSt
Ubizo lwenkolo: luyini futhi lubonwa kanjani?
Zindla namuhla ngodumo olunikezayo nolutholayo
Isimanga sokholo, ukuzindla kwanamuhla
Ukuzindla namuhla: ungagodli lutho